Hoan'ny CISCO ny Toamasina voalohany dia efa nisy roa herinandro izay no niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra rehetra na miakina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Na izany aza anefa dia tsy tokony variana ny amin'ny fanarahana ireo fepetra sakana rehetra ny tsirairay. Tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena dia nohamafisiny ny fiverenan'ny mpianatra rehetra manerana ny nosy an-tsekoly.
Nisy araka izany ny fahazahoana fitaovana hoan'ny CISCO ny Toamasina voalohany, ka hisitraka izany avokoa ny sekoly rehetra eto Toamasina na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Nambaran'ny Sefo CISCO ny Toamasina voalohany Andriamatoa Marolahy Joseph fa ny isan'ny olona mitondra ny tsimok'aretina no mihena fa tokony ho fahazarantsika mandrakariva ny manaja ireo fihetsika sakana rehetra tokony ho atao.
Manoloana izany indrindra dia nandray andraikitra avy hatrany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena niara-miombonantoka tamin'ny UNICEF ka nanolotra fitaovana mba hiarovana ireo mpianatra amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina covid 19 DLM "Diaspositif de Lavage des Mains" fitaovana fanasana tanana 60 litatra miloko manga miaraka amin'ny savony hanasana tanana raha toa ka 20l teo aloha no nozaraina.
Hisitraka izany avokoa ny sekoly rehetra manerana ny tampon-tananan'ny Toamasina, ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana miisa 34 sy ireo sekoly tsy miakina 187. Noho izany indrindra dia raha misy fidinana any ifotony izay ataon'ny tompon'andraikitra mikasika ny fampianarana dia tokony tsy hisy sekoly na dia iray aza tsy hanana ity DLM ity eo ampidirana amin'ny sekoly tsirairay, natao izao hetsika izao mba hiarovana ny zaza malagasy amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina.
(223) S.Lantomalala : 01-06-2021 - 09:30